Xiaomi Mi Pad2တွင် Dual Boot နှင့် Intel processor ကိုထည့်သွင်းထားသည် Androidsis
Xiaomi Mi Pad2တွင် Dual Boot နှင့် Intel processor ကိုထည့်သွင်းထားသည်
Alexis Martinez | | Android တက်ဘလက်များ
Xiaomi သည်လက်ရှိတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏နံပါတ်တစ်မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဒီအာရှကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသက်တမ်းအတွင်းထုတ်လွှတ်ခဲ့တဲ့စမတ်ဖုန်းအမြောက်အများကြောင့်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာလူသိများလာတယ်။ ဤ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစမတ်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
၎င်းထုတ်ကုန်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်း၏ကျော်ကြားသောတက်ဘလက်ဖြစ်သည့် Mi Pad ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လကကြေညာခဲ့ပြီးအာရှဈေးကွက်တွင်အရောင်းရဆုံးတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Xiaomi သည်ယခုနှစ်မကုန်မီတွင်ပြသနိုင်မည့်ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုသည် Xiaomi Mi5၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Xiaomi သည်ယခုနှစ်ကုန်မတိုင်မီထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာသင်၏စမတ်၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်, အ Xiaomi က Mi Pad2။
ငါတို့မှာရှိတယ် အစဉ်အမြဲဒီအနာဂတ် device ကိုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် ဒီတက်ဘလက်မှာပေါ်လာတဲ့ပေါက်ကြားမှုတွေကြောင့်၊ ယခုငါတို့ကျော်ကြားသောတရုတ်စမတ်တက်ဘလက်၏ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြန်လာ။
Xiaomi Mi Pad 2, Dual Boot နှင့် Intel SoC?
တရုတ်နိုင်ငံမှမကြာသေးမီကထွက်ပေါ်ခဲ့သောကောလာဟလများအရ Xiaomi Mi Pad2သည် Dual boot ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ်ပိုမိုနည်းပညာဆိုင်ရာစကားလုံးများ, Dual Boot ။ MIUI 5.1 စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့် Windows7အောက်ရှိ tablet သည် Android 10 Lollipop နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကဖော်ပြသည်။
ကောလဟာလများအရတက်ဘလက်ကို Intel ပရိုဆက်ဆာဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတွင်ပါရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းဆိုထားသည် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် အနိမ့် QHD resolution, 2560 x 1440 pixels ။ အတွင်းပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့် Intel ပရိုဆက်ဆာအပြင် RAM3သို့မဟုတ်4GB ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံကဏ္sectionတွင် 13-megapixel ထုတ်ကုန်၏အနောက်ဘက်ရှိအဓိကကင်မရာကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်, တက်ဘလက်သတ္တုကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
ပေါက်ကြားခဲ့သောဓာတ်ပုံများအရ Mi Pad2၏ဓာတ်ပုံများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် Nexus 2012 တွင် Google ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော smart tablet နှင့်ဆင်တူသည်။ ယခုအချိန်တွင်အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ကောလာဟလများမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Xiaomi သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယခုနှစ်မကုန်မီနှစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏စမတ်တက်ဘလက်အသစ်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်မပေးချေ။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူကို ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်မတိုင်မီရောက်ရှိလာမည့်အနာဂတ်အနာဂတ်စက်ပစ္စည်းတည်ရှိမှုကိုတရားဝင်ကြေငြာရန်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဘာလဲ Xiaomi ရဲ့ smart tablet လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Android တက်ဘလက်များ » Xiaomi Mi Pad2တွင် Dual Boot နှင့် Intel processor ကိုထည့်သွင်းထားသည်
Android Wear သည် iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်